အိမ်ခြံမြေစာရင်းများ ရောင်းရန်နှင့်ငှားရန် Texas မှာ
နေအိမ်များ in Lakeside Dfw
နေအိမ်များ in Flower Mound
နေအိမ်များ in Royal Forest
နေအိမ်များ in Conroe
နေအိမ်များ in Magnolia
မြေကွက် in Lometa
မြေကွက် in Texas
နေအိမ်များ in Granbury
ကွန်ဒို in Terrace Gardens
ကွန်ဒို in Midland
ကွန်ဒို in Texas
အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များ in Southwood Valley
အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များ in College Station
နေအိမ်များ in Southeast Arlington
နေအိမ်များ in Arlington
နေအိမ်များ in Lakeview Meadows Estates
နေအိမ်များ in Rowlett
အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များ in Huntsville
1 - 10 ၏ 9254 စာရင်းများ
This Villa is everything you need inarental, long term or short. This house if fully furnished with high end furnishings nestled into one of the best urban areas in DFW. Lakeside is blooming with friendly restaurants and shops and beautiful Lake Grapevine for boating and fishing with hiking and bi...
ငှားရန် |3အိပ်ရာ|4ရေချိုး | 2536 Sq feet | 0.05 Acre
ထုတ်ဝေသည် Jenny Williams
မြင်ကွင်း နေအိမ်များ ထုတ်ဝေခဲ့သည် 22 hours ago
Welcome Home!!!! Well-maintained, all brick exterior, and fresh interior paint. Single story,3bedrooms,2baths, and2car attached garage. Fully fenced 13, 500 square foot lot. Nice storage shed in backyard. Covered back porch ready for entertaining or quiet time with coffee. Enjoy the spring fed...
ရောင်းရန်ရှိသည် |3အိပ်ရာ|2ရေချိုး | 1642 Sq feet | 0.31 Acre
ထုတ်ဝေသည် Encompass Real Estate Group
Home For Sale In Magnolia, Texas
Bottlebrush floor plan. Pre-construction with all selections available at this time and an approximate completion date of September 2021. Beautiful new construction by Bethel Homes is situated ona20,680+ sq ft lot offering four bedrooms, three andahalf baths and an oversized, front loading two-c...
ရောင်းရန်ရှိသည် |4အိပ်ရာ|4ရေချိုး | 3387 Sq feet | 0.475 Acre
Magnolia in Texas (United States), 77354
ထုတ်ဝေသည် Martha Turner Sotheby's International Realty - Central Houston Brokerage
Plot For Sale In Lometa, Texas
ရောင်းရန်ရှိသည် | 28.02 Acre
ထုတ်ဝေသည် All City Real Estate Ltd. Co.
Beautifully updated three bedroom two andahalf bath home located just minutes from the Granbury town square! The home has an office, second living upstairs, and large laundry room with sink. The open floor plan make this houseagreat place for entertaining. Within the past couple years there have...
ရောင်းရန်ရှိသည် |3အိပ်ရာ|3ရေချိုး | 1790 Sq feet | 0.16 Acre
ထုတ်ဝေသည် Horton Neely Realtors, Llc
Condo For Sale In Midland, Texas
Super cute low maintenance condo-so many updates done over the last 2-3 years. Seller replaced windows, doors (interiorexterior), appliances, flooring, insulation added in walls and ceiling when roofext. siding was replaced.2very spacious bedrooms w/walk-in closetsremodeled bath upstairs. Lg. livi...
ရောင်းရန်ရှိသည် |2အိပ်ရာ|2ရေချိုး | 976 Sq feet | 0.095 Acre
ထုတ်ဝေသည် Real Estate One - Christina Mcmillan
AVAILABLE IN JUNE! 821 San Benito isagreat value and well maintained property. This home is located in the heart of south College Station. The home features2bedrooms and 1 bath. The home has vinyl plank flooring throughout. Step out of the master bedroom ontoacovered patio. All kitchen applian...
ငှားရန် | 0.2 Acre
ထုတ်ဝေသည် Kathy Scott
If you're looking foracozy house inacozy neighborhood, this is the home for you! This clean and well-cared-for dwelling includes many updates includinganew roof, gutters, shed, and new fiber cement siding. Huge backyard for your family gatherings or justaperfect place for the kids and pets t...
ရောင်းရန်ရှိသည် |3အိပ်ရာ| 1 ရေချိုး | 1441 Sq feet | 0.168 Acre
ထုတ်ဝေသည် Keller Williams Dallas County
Welcome Home to amazing 1975 complete remodel wPOOL! 3BR 2Bth 2Car 1, 723sf of gorgeous updates throughout. Walk into entry and be greeted withaFARMHOUSE motif from shiplap walls and beautiful plank flooring. Family room open to lg dining area showcasing beautiful brick wood-burning fireplace. Ent...
ရောင်းရန်ရှိသည် |3အိပ်ရာ|2ရေချိုး | 1723 Sq feet | 0.164 Acre
Rowlett in Texas (United States), 75089
ထုတ်ဝေသည် Ebby Halliday - 190 Richardson
Property For Sale In Huntsville, Texas
DO NOT DISTURB TENANTS. All showings only with accepted offer during option. Covid protocols areamust. Portfolio of four row-style modular houses for sale in close proximity to Sam Houston State University. Each freestanding/fee simple home has 1638sf consisting of4bedrooms/4 baths with4outdoo...
ရောင်းရန်ရှိသည် | 0.952 Acre
Huntsville in Texas (United States), 77340
ထုတ်ဝေသည် Keller Williams - Lake Travis
အမျိုးအစားရွေးပါResidential homes Houses Apartments Flats Rooms Condos Townhouses Units Studios Villas Cottages Bungalows Log Homes Homes Foreclosed HomesLand lots Residential Land Agricultural Land Industrial LandGarages and parking places Parking garages Parking spacesCommercial Real Estate Hotels Office spaces Business Premises Rooms of catering Buildings of free appointment Industrial premises Warehouse spacesAll Others Real Estate All Others Real Estate Ecological Housing Extraterrestrial Real EstateBusiness Directory Financial Service Providers Moving Companies Home Improvement Contractors Home Inspection Services Construction Companies Cleaning Contractors Design Services Pest Control Landscaping Companies Furniture Companies Insurance Services Photography ServicesReal Estate Agent Directory Real Estate Agents Real Estate Brokers Real Estate Analytics Property Managers Real Estate Consultancy
တက္ကဆက်ပြည်နယ် (ဒေသအလိုက်၊ စပိန်၊ တက္ကဆက်သို့မဟုတ်တဂျက်စ်၊ အသံထွက် [extexas] (နားထောင်)) သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတောင်ပိုင်းအလယ်ပိုင်းဒေသတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပြည်နယ် (အလက်စကာနောက်မှ) နှင့်လူ ဦး ရေ (ကယ်လီဖိုးနီးယားနောက်တွင်) အရအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ဒုတိယအကြီးဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်သည်။ Texas ပြည်နယ်သည်အရှေ့ဘက်တွင် Louisiana ပြည်နယ်များ၊ အရှေ့ဘက်တွင် Arkansas ပြည်နယ်၊ မြောက်ဘက်တွင် Oklahoma ပြည်နယ်၊ အနောက်ဘက်တွင် New Mexico၊ မက္ကဆီကိုပြည်နယ်များဖြစ်သော Chihuahua၊ အရှေ့တောင်ဘက်မက္ကဆီကိုပင်လယ်ကွေ့နှင့်အတူ။ ဟူစတန်သည်တက္ကဆက်ပြည်နယ်တွင်လူ ဦး ရေအထူထပ်ဆုံးမြို့ဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌စတုတ္ထမြောက်အကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ ဆန်နီယိုသည်ပြည်နယ်တွင်လူ ဦး ရေအများဆုံးမြို့ဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ Dallas-Fort Worth နှင့် Greater Houston တွင်စတုတ္ထမြောက်နှင့်ပဉ္စမမြောက်အကြီးဆုံးသောမြို့ပြစာရင်းအင်းများဖြစ်သည်။ အသီးသီးတိုင်းပြည်အတွက်။ အခြားအဓိကမြို့ကြီးများမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ဒုတိယလူ ဦး ရေအများဆုံးမြို့တော် Austin နှင့် El Paso တို့ဖြစ်သည်။ တက္ကဆက်ပြည်နယ်ကို Lone Star State ဟုခေါ်တွင်ပြီးလွတ်လပ်သောသမ္မတနိုင်ငံအဖြစ်ယခင်ပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပြီးမက္ကဆီကိုမှလွတ်လပ်ရေးအတွက်ရုန်းကန်နေမှုကိုသတိပေးခဲ့သည်။ Lone Star ကိုတက္ကဆက်ပြည်နယ်အလံနှင့်တက္ကဆက်ပြည်နယ်တံဆိပ်ပေါ်တွင်တွေ့နိုင်သည်။ Texas ပြည်နယ်၏ Balcones ပြတ်ရွေ့ကဲ့သို့သောအရွယ်အစားနှင့်ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာလက္ခဏာများကြောင့် Texas တောင်ပိုင်းနှင့် Southwestern ဒေသများတွင်ရှုခင်းအမျိုးမျိုးကွဲပြားသောရှုခင်းများစွာပါ ၀ င်သည်။ တက္ကဆက်ပြည်နယ်သည်အမေရိကန်အနောက်တောင်ပိုင်းသဲကန္တာရများနှင့်လူကြိုက်များသော်လည်းတက္ကဆက်ပြည်နယ်၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းအောက်သာသာသာသဲကန္တာရဖြစ်သည်။ လူ ဦး ရေစင်တာအများစုသည်ယခင်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသ၊ မြက်ခင်းပြင်များ၊ သစ်တောများနှင့်ကမ်းရိုးတန်းဒေသများတွင်ဖြစ်သည်။ အရှေ့ဘက်မှအနောက်ဘက်သို့ခရီးသွားခြင်းသည်ကမ်းရိုးတန်းရွှံ့နွံများနှင့်ထင်းရှူးပင်များ၊ လှိမ့်လွင်ပြင်များနှင့်ကြမ်းတမ်းသောကုန်းမြင့်များအထိနှင့်နောက်ဆုံးတွင်သဲကန္တာရနှင့် Big Bend ၏တောင်တန်းများအထိတွေ့နိုင်သည်။ "တက္ကဆက်ပြည်နယ်ကျော်အလံခြောက်ခု" ဟူသောဝေါဟာရသည်နယ်မြေကိုအုပ်စိုးသောနိုင်ငံများစွာကိုရည်ညွှန်းသည်။ စပိန်သည်တက္ကဆက်ပြည်နယ်၏ဒေသကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့်ထိန်းချုပ်သောပထမဆုံးဥရောပနိုင်ငံဖြစ်သည်။ ပြင်သစ်သည်သက်တမ်းတိုသောကိုလိုနီကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့သည်။ မက္ကဆီကိုသည် ၁၈၃၆ အထိတက္ကဆက်ပြည်နယ်လွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပြီးလွတ်လပ်သောသမ္မတနိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့သည်။ 1845 ခုနှစ်တွင်တက္ကဆက်ပြည်နယ် 28th ပြည်နယ်အဖြစ်ပြည်ထောင်စုဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ပေါင်းစည်းရေးသည် ၁၈၄၆ တွင်မက္ကဆီကို - အမေရိကန်စစ်ပွဲသို့ ဦး တည်စေသည့်အဖြစ်အပျက်များကိုစတင်ခဲ့သည်။ အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်မဖြစ်ပွားမီကတက္ကဆက်ပြည်နယ်သည် ၁၈၆၁ ခုနှစ်အစောပိုင်းတွင်အမေရိကန်မှခွဲထွက်ခြင်းကိုကြေငြာခဲ့ပြီးမတ်လတွင်အမေရိကန်ကွန်ဖက်ဒရိတ်ပြည်နယ်များသို့တရားဝင်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ တူညီတဲ့နှစ်2။ ပြည်တွင်းစစ်နှင့်ဖက်ဒရယ်အစိုးရတွင်ပြန်လည်ကိုယ်စားပြုမှုပြန်လည်ရရှိပြီးနောက်တက္ကဆက်ပြည်နယ်သည်ကြာရှည်စွာစီးပွားရေးရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။ သမိုင်းကြောင်းအရအဓိကစက်မှုလုပ်ငန်းကြီး ၄ ခုသည်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်မီတက္ကဆက်ပြည်နယ်၏စီးပွားရေးကိုပုံဖော်ခဲ့သည်။ ကျွဲနွားများ၊ ဘိုင်ဆန်၊ ချည်၊ သစ်နှင့်ရေနံ။ အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်မတိုင်မီနှင့်ပြီးနောက်တွင်တက္ကဆက်ပြည်နယ်ကြီးစိုးလာသည့်နွားလုပ်ငန်းသည်ပြည်နယ်အတွက်အဓိကစီးပွားရေးမောင်းနှင်အားဖြစ်ခဲ့ပြီးတက္ကဆက်ပြည်နယ်၏ကောင်းဘွိုင်ပုံသဏ္ဌာန်ကိုဖန်တီးခဲ့သည်။ ၁၉ ရာစုနှောင်းပိုင်း၌ကျွဲနွားလုပ်ငန်းသည်အကျိုးအမြတ်နည်းပါးသောကြောင့်ဝါနှင့်သစ်သည်အဓိကစက်မှုလုပ်ငန်းများဖြစ်လာသည်။ သို့သော်နောက်ဆုံးတွင်အဓိကရေနံသိုက် (အထူးသဖြင့် Spindletop) ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုသည် ၂၀ ရာစုနှစ်များစွာစီးပွားရေး၏နောက်ကွယ်တွင်စီးပွားရေး၏တွန်းအားဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၂၀ ရာစုအလယ်ပိုင်းတွင်တက္ကဆက်တက္ကသိုလ်များတွင်ခိုင်မာသောရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများကြောင့်စီးပွားရေးနှင့်အဆင့်မြင့်နည်းပညာစက်မှုလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်။ ၂၀၁၅ တွင် Fortune ၅၀၀ တွင်ကုမ္ပဏီ ၅၄ ခုရှိသည့်အနက် ၅၅ ခုစာရင်းတွင်ဒုတိယနေရာတွင်ရှိသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းများတိုးများလာသည်နှင့်အမျှခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ရေနံဓာတု၊ စွမ်းအင်၊ ကွန်ပျူတာနှင့်အီလက်ထရောနစ်၊ သိပ္ပံ။ တက္ကဆက်ပြည်နယ်သည်အမေရိကန်ကို ၂၀၀၂ ခုနှစ် မှစတင်၍ ပြည်နယ်တင်ပို့မှုမှ ၀ င်ငွေရရှိခဲ့သည်။ တက္ကဆက်ပြည်နယ်သည်အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံဖြစ်လျှင်ကမ္ဘာပေါ်တွင် ၁၀ ခုမြောက်အကြီးဆုံးစီးပွားရေးဖြစ်လိမ့်မည်။